Boqortooyada Sacuudiga oo laga furayo goobaha filimada lagu daawado (Shineemo) – Madal Furan
Hoy > Warka > Boqortooyada Sacuudiga oo laga furayo goobaha filimada lagu daawado (Shineemo)
Boqortooyada Sacuudiga oo laga furayo goobaha filimada lagu daawado (Shineemo)
Madal Furan- Dalka Sucuudiga ayaa markii ugu horraysay mudo tobanaan sano ah dalkiisa ka furaya sinimooyo, labada todobaad ee soo socda.
Todobaataneeyadii dalka waxa ka jiray sinimooyo laakiin waxa la xidhay markii saamaynta wadaadada Muslimiinta ah ee mayalka adagi xoogaysatay.
18-ka bishan April ayaa ah muddada loo qabtay in xadhiga laga jaro furitaanka sinimoogii ugu horeeyey ee laga furo caasimada Riyad ee Sucuudiga.
Isbaddeladan ayaa waxaa loogu talogalay inay gacan ka geystaan in dhaqaalaha Sucuudiga si uu uga gudbo ku tiirsanaanta shidaalka, iyo in shaqooyin cusb loo abuuro shacabka Sucuudiga iyo waliba inay lacagahooda ku kharash gareeyaan gudaha dalka halkii ay ugu safri lahaayeen dibaddaha si ay sinimooyo u soo daawadaan kuwooda dalxiiska u baxaa.
SAWIRO:-Boombale la buufiyay oo loo ekeysiiyay ‘Trump oo lagu duulin doono Londan dusheeda.
Guddi ay magacaabeen Maamuladda Goboladda Soomaaliya oo dowladda FS kala xisaabtami doona awood qaybsiga
Madaxweynaha Puntland oo shaqadii ka eryey Laba masuul ee Hay’adaha PSS iyo PIA